Global Voices teny Malagasy » Japana: Sarimiaina Manazava ny Olan’ny Nokleary Amin’izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2011 13:02 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Tontolo_iainana, Voina, Zavakanto & Kolontsaina
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitray manokana momba ny Horohorontany Japana 2011 .
Ny mpilalao fototra ao dia Genpatsu-kun (izany hoe i Mr. Nuclear power station ) izay narary vavony noho ilay horohorontany. Ireo dokotera (izany hoe ireo manampahaizana manokana momba ny nokleary) tonga mba hitsabo azy miaraka aminà rano sy asidra boric mba hanakanana azy tsy hanao “poo” (izany hoe hamoaka taratra, saingy raha amin'ny firesaka Malagasy andavan'andro dia mandefa setroka na rivotra). Amin'izao fotoana, ny aretim-bavonin'i Genpatsu-kun tsy mitsahatra nefa araha-maso tsy mitsahatra kosa ny toe-pahasalamany ary hatreto, dia “poopees” miverimberina (izany hoe. famoahan-tsetroka) no lazaina fa nisy.
Ilay sarimiaina koa dia manazava ny maha-samy hafa ny fomba, na dia amin'ny endrika ratsy aza, nataon'i Mr. Genpatsu (izany hoe ny ozinina ao Fukushima) amin'ny fomba nataon'i Mr. Chernobyl, satria izy dia mitafy lamba malefaka toa landihazo. Kanefa, raha toa i Mr. Genpatsu tsy maintsy hi-“poo” (izany hoe hipoaka ilay ozinina nokleary), ho ratsy ny vokany amin'ny fahasalaman'ireo olona monina eo amin'ilay faritra mandritra ny ampolo-taona maro.
Ny mpilalao fototra ao dia Genpatsu-kun (izany hoe i Mr. Nuclear power station ) izay narary vavony noho ilay horohorontany. Ireo dokotera (izany hoe ireo manampahaizana manokana momba ny nokleary) tonga mba hitsabo azy miaraka aminà rano sy asidra boric mba hanakanana azy tsy hanao “poo” (izany hoe hamoaka taratra, saingy raha amin'ny firesaka Malagasy andavan'andro dia mandefa setroka na rivotra). Amin'izao fotoana, ny aretim-bavonin'i Genpatsu-kun tsy mitsahatra nefa araha-maso tsy mitsahatra kosa ny toe-pahasalamany ary hatreto, dia “poopees” miverimberina (izany hoe. famoahan-tsetroka) no lazaina fa nisy.Ilay sarimiaina koa dia manazava ny maha-samy hafa ny fomba, na dia amin'ny endrika ratsy aza, nataon'i Mr. Genpatsu (izany hoe ny ozinina ao Fukushima) amin'ny fomba nataon'i Mr. Chernobyl, satria izy dia mitafy lamba malefaka toa landihazo. Kanefa, raha toa i Mr. Genpatsu tsy maintsy hi-“poo” (izany hoe hipoaka ilay ozinina nokleary), ho ratsy ny vokany amin'ny fahasalaman'ireo olona monina eo amin'ilay faritra mandritra ny ampolo-taona maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/17/14901/